DEG DEG: Is rasaaseyn ka dhacday xarunta doorashada Aqalka Hoose ay ka dhaceysay ee Jowhar! | kowtharmedia.com
Home WARAR DEG DEG: Is rasaaseyn ka dhacday xarunta doorashada Aqalka Hoose ay ka dhaceysay ee Jowhar!
DEG DEG: Is rasaaseyn ka dhacday xarunta doorashada Aqalka Hoose ay ka dhaceysay ee Jowhar!
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in goordhaw afaafka hore ee xaruta ay ka socoto doorashada ay ka dhacday iska hor imaad u dhaxeeyay Musharxiin ku tartamayay kursiga aqalka hooe ee Baarlamaanka.
Previous PostMusuq maasuq Jira aawgeeda Tarsan oo dhahay “Waxaa la ii diiday inaan u tartamo Kursiga Xildhibaanimo"!! Next PostDaawo:Soomaaliya oo ka qayb gashay Shir Deg Deg Ah oo Ururka Iskaashiga Islaamku ku yeeshay magaalada Makka!